ပုံထဲက ကြက်ဥထည့်ထားတဲ့ပုံစံကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပါ.. ပြီးရင်ဖတ် ကြည့်လိုက်နော် ! – Trend.com.mm
ပုံထဲက ကြက်ဥထည့်ထားတဲ့ပုံစံကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပါ.. ပြီးရင်ဖတ် ကြည့်လိုက်နော် !
စိတ်ပညာရှင်တွေဟာ လူတွေရဲ့အနေထိုင်၊ အပြုအမူ ၊ ရွေးချယ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်နေစိတ်ထားများစွာကို ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ အပတ်စဉ်ရေးနေကျအတိုင်း ဒီတစ်ခါလည်း သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ပုံစံလေးကိုရွေးလိုက်ပါ.. တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေ ပြောပြပေး
သင့်မှာ ကြက်ဥ ၄လုံးနဲ့ ထည့်တဲ့အံခွက်လေးတစ်ခုရှိမယ်။ သင့်ကြက်ဥတွေကို ဘယ်လိုနေရာချမလဲ..? အောက်က ပုံလေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။
သင့်မှာ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ အမြဲတမ်း အိုင်ဒီယာတွေရှာဖွေနေသူဖြစ်တယ်။ တစ်နေရာမှာ အချိန်ကြာကြီးထိုင်နေချင်သူမဟုတ်သလို၊ ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ဆို ဝေးဝေးကရှောင်တယ်။ ကိုယ်ဘာလိုအပ်နေတာလဲဆိုတာကို ချက်ချင်းသိတယ်။ လူတွေနဲ့လည်း လိုက်လျောညီထွေနေတတ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကဘာလဲဆိုတော့ တစ်ဖက်လူရဲ့အတွေးမြင်ပေါ်လေးစားမှုရှိတာပါပဲ။ စိတ်ဓာတ်သိပ်ပြင်းပြတယ်။
သင့်မှာ ခွဲခြားစိတ်ဖြာနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ စီစဉ်သူတစ်ယောက်အဖြစ် သင်ဟာမွေးဖွားလာသူဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အလုပ်အပေါ်အရမ်းလေးပေးတဲ့အတွက် ကြီးမားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုင်တွယ်ရပါမယ်။ သင့်မှာ ကောင်းမွန်တဲ့ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက် မြန်မြန်အောင်မြင်မယ်။ အဆက်မပြတ်သင်ယူနေတာကို သဘောကျသူပါ။ သင့်ရဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှုကြောင့် အောင်မြင်က လက်ထဲအချိန်ခဏအတွင်းရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ပြောင်းမြန်သူဖြစ်တယ်။ ခက်ခဲတဲ့ ကိစ္စတွေ ကိုင်တွယ်ရတတ်ပါတယ်။ အသစ်သစ်တွေ အမြဲသင်ယူနေပြီး ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြဲလှပအောင်တန်ဆာချင်သူလည်းဖြစ်တယ်။ သင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စနဲ့ ၊ အချစ်ရေးကိစ္စတွေမှာ အခြားလူအမြဲစွတ်ဖက်
တာကိုခံရပါမယ်။ ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရာပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်ကအပြောင်းလဲအလွန်မြန်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလောကမှာတော့ ဦးဆောင်နိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာ ဆရာကြီးပဲ။ ဖြစ်လာတဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကို ချက်ချင်းသုံးသပ်ပြီး အဖြေရှာမြန်တယ်။ မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အချိန်တိုတွင်းချတတ်တဲ့ အကျင့်ကြောင့်ပဲ ကိုယ်လိုရာပန်းတိုင်ကို အချိန်တန်တာနဲ့ ရောက်မှာပါ။ လူတွေအပေါ်သင်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်။ သင့်ရဲ့အရည်အချင်းကြောင့် လူလေးစားခံရမှာပါ။ ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ရှေ့ဆက်လျှောက်ပါ။
သူမရဲ့ပြားနေတဲ့ရင်ဘတ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီးဝေဖန်မှုတွေအပေါ် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ကေပေါ့ပ်စတား Amber Liu